ပျောက်သောသား - လုကာ 15 သမ်မာကမျြးပုံပြင်အကျဉ်းချုပ်: 11-32
11-32: အပျောက်သောသား၏ဥပမာအနကျအဓိပ်ပါယျလုကာ 15 မှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။
ထို့အပြင်ပျောက်ဆုံးသွားသောသားတျော၏ပုံဥပမာအဖြစ်လူသိများသည့်ပျောက်သောသား၏ဇာတ်လမ်း, ချက်ချင်းပြီးနောက်အောက်ပါအတိုင်း ပုံဥပမာ ၏ ပျောက်ဆုံးသွားသောသိုး နှင့်ပျောက်ဆုံးသွားသောအကြွေစေ့။ ဤသုံးပါးဥပမာနှင့်အတူ, ယရှေုသညျကောငျးကငျဘုံပျောက်ရှာတွေ့သည့်အခါဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့ခြင်း, ဘယ်လိုမေတ္တာရှင်ခမညျးတျောကလူကိုကယ်တင်ညျဘယ်လောက်ဆုံးရှုံးခံရဖို့ဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာသရုပ်ပြခဲ့သည်။
ယရှေုသညျကိုလည်းတုံ့ပြန်ခဲ့သည် ဖာရိရှဲတို့သည် '' တိုင်ကြားချက်: "ဤသူသည်အပြစ်ရှိသောသူတို့ကိုကြိုဆိုသူတို့နှင့်အတူစားသည်။ "
အဆိုပါပျောက်သောသား၏ဇာတ်လမ်းသားနှစ်ယောက်ရှိပြီးသူတစ်ဦးသည်လူနှင့်အတူစတင်ခဲ့သည်။ အငယ်သားတစ်ဦးအစောပိုင်းအမွေကိုအတိုင်းမိသားစုအိမ်ခြံမြေ၏မိမိအဘို့အဘို့မိမိအဘကမေးတယ်။ လက်ခံရရှိပြီးတာနဲ့သားအခငျြးဝေးသောပြည်မှရှည်လျားသောခရီးကိုချွတ်သတ်မှတ်နှင့်ရိုင်းလူနေမှုအပေါ်သူ၏ကံဇာတာဖြုန်းတီးဖို့ကစတင်ခဲ့သည်။
ငွေကိုထုတ်ပြေးသည့်အခါ, တစ်ဦးပြင်းထန်အစာခေါင်းပါးသောအခါတိုင်းပြည်တို့သို့နှင့်သားဆိုးရွားအခြေအနေများတွင်မိမိကိုယျကိုတွေ့။ သူကဝက်စာကျွေးမယ့်အလုပ်ကြာတယ်။ နောက်ဆုံးတော့သူပင်ဝက်ဖို့တာဝန်အစားအစာစားရန်ညျဒါကြောင့်ခိုကိုးရာမဲ့ပေါက်နေသည်။
ထိုလုလင်နောက်ဆုံးတော့သူ့ဖခင်သတိရသည်, မိမိအာရုံထံသို့မရောက်ရ။ နှိမျ့ခခြွငျးအတွက်, မိမိမိုက်မဲခြင်းအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်မိမိအဘထံသို့ပွနျနှင့်အဘို့အမေးရန်ဆုံးဖြတ် ခွင့်လွှတ်ခြင်း နှင့်သနားတျောမူပါ။ စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ပြီးသူဖခင်, ကရုဏာစိတ်ကိုဖွင့်လက်နက်နှင့်အတူနောက်ကျောကသူ့သားကိုလက်ခံရရှိပါတယ်။ သူကသူ့ရှုံးနိမ့်သား၏ပြန်လာနေဖြင့်အလွန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဤအတောအတွင်းအဟောင်းသား အမျက် ထွက်. boiles သူသည်မိမိညီငယ်ရဲ့ပြန်လာဆင်နွှဲဖို့ဂီတနှင့်ကခုန်ခြင်းနှင့်အတူပါတီရှာဖွေတွေ့ရှိရန်လယ်ကွင်းအလုပ်လုပ်မှကြွလာသောအခါ။ အဘကသူ့အနေဖြင့်အစ်ကိုဖျောင်းဖျဖို့ကြိုးစားပါတယ် မနာလို , ရှင်းပြဒေါသ "သင်သည်ငါနှင့်အတူအစဉ်မပြတ်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ငါအရာအားလုံးကိုဥစ္စာဖြစ်၏။ "
အဆိုပါပျောက်သောသားပုံပြင် မှစ. အကျိုးစီးပွား၏ရမှတ်
ပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ဦးသားသည်အဘရဲ့သေခြင်းအချိန်တွင်သူ၏အမွေဥစ္စာကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ အငယ်အစ်ကိုမိသားစုအိမ်ခြံမြေ၏အစောပိုင်းဌာနခွဲလှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းခဲ့သည်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတစ်ဦးတစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ခြင်းနှင့်နုသဘောထားကိုဖော်ပြခြင်းမ, မိမိအဘ၏အခွင့်အာဏာအဘို့အပုန်ကန်တတ်သောနှင့်ဂုဏ်ယူအရေးမစိုက်ပြသခဲ့သည်။
ဝက်မစင်ကြယ်သောတိရိစ္ဆာန်များခဲ့ကြသည်။ ယုဒလူတို့ပင်ဝက်မထိဖို့ခွင့်မပြုထားခဲ့ကြသည်။ သားအမိမိဝမ်းကိုဖြည့်ဖို့ကသူတို့စားစရာဘို့ပင်တောင့်, ဝက်စာကျွေးမယ့်အလုပ်အကိုင်အယူသောအခါ, သူဖြစ်နိုင်သည်သွားနိုင်သကဲ့သို့အနိမ့်ပြိုလဲခဲ့ကွောငျးဖျောပွထားပါ။ ဤသားကိုဘုရားသခင်အားပုန်ကန်နေထိုင်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ တခါတရံမှာကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အာရုံထံသို့ လာ. ရှေ့တော်၌ကျောက်အောက်ခြေထိဖို့ရှိသည် ကျနော်တို့အပြစ်အသိအမှတ်ပြုရန် ။
လုကာရဲ့ခရစ်ဝင်ကျမ်း၏ဤအပိုင်းကိုပျောက်ထံအပ်နှံသည်။ ဒါကြောင့်စာဖတ်သူများအဘို့ပေါ်ပေါက်ပထမဦးဆုံးမေးခွန်းတစ်ခုကို "ကျွန်မဆုံးရှုံးခဲ့လား" ဖြစ်ပါသည် အဆိုပါခမည်းတော်သည်ကျွန်တော်၏ရုပ်ပုံဖြစ်ပါတယ် ကောင်းကင်ဘုံရှင်အဘ ။ ဘုရားသခငျသညျအကြှနျုပျတို့နှိမ့်ချနှလုံးသားများနှင့်အတူအထံတော်သို့ပြန်လာသည့်အခါကျွန်တော်တို့ကို restore မေတ္တာကရုဏာနှင့်, စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့စောင့်ဆိုင်းရပါတယ်။ သူကကျွန်တော်တို့ကိုအတွက်အရာရာကမ်းလှမ်း သူ၏နိုင်ငံကို ပျော်စရာအခမ်းအနားနှင့်အတူအပြည့်အဝကြားဆက်ဆံရေးပြန်လည်။ သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိတ်ထငျရာစိုငျးအပေါ် နေ. မထားဘူး။
အခန်း 15 ၏ရှေ့ဦးစွာ မှစ. Reading, ငါတို့သည်အဟောင်းသားရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖာရိရှဲတို့၏ရုပ်ပုံကြောင်းကိုသိမြင်ရကြ၏။ ၎င်းတို့၏ Self-ဖြောင့်မတ်, သူတို့သည်အပြစ်သားများနှင့်အတူပေါင်းသင်းဖို့ငြင်းဆန်ခြင်းနှင့်အပြစ်ရှိသောသူကိုဘုရားသခင်အားပြန်လည်ရောက်ရှိလာသောအခါဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိဖို့မေ့လျော့ကြပြီ။
ခါးသီးမှု နှင့်နာကြည်းသူ့ညီအပြစ်လွှတ်ခြင်းကနေအဟောင်းသားစောင့်ရှောက်လော့။ ဒါဟာသူလွတ်လွတ်လပ်လပ်စဉ်ဆက်မပြတ်မှတဆင့်အတော်ပင်ဘဏ္ဍာသူ့ကိုကွယ် ဖခင်နှင့်အတူဆက်ဆံရေးမျိုး ။ သူကသူတို့ကြည့်ရှုမယ်လို့သိလို့ယရှေုသညျအပွစျသားနှငျ့ထှကျဆွဲထားကိုခစျြ ကိုကယျတငျတျောမူ၏လိုအပ်ချက် နှင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့်အတူ, ရေကြီးခြင်း, ကောင်းကင်ဘုံတုံ့ပြန်ကြသည်။
သင်ဤပုံပြင်ထဲမှာဘယ်သူနည်း သင်တစ်ဦးဖွုနျးတီးသောဖာရိရှဲ, ဒါမှမဟုတ်ကျွန်ဖြစ်ပါသလား သငျသညျပျောက်ခြင်းနှင့်ဘုရားသခင်ထံမှဝေး, ပုန်ကန်သောသားဖြစ်ပါသလား သင်တစ်ဦးအပြစ်ရှိသောသူကိုဘုရားသခင်အားပြန်လာသည့်အခါဝမ်းမြောက်၏မရှိတော့နိုင်စွမ်းကိုယ်ပိုင်ဖြောင့်မတ်သောဖာရိရှဲ, ဖြစ်ပါသလား
သင်တစ်ဦးပျောက်ဆုံးအပြစ်ရှိသောသူကိုကယျတငျတျောမူခွငျးကိုရှာခြင်းနှင့်ခမည်းတော်၏မေတ္တာတော်ကိုရှာဖွေတာဖြစ်ပါသလား သငျသညျ, အခြမ်းမှမတ်တပ်ရပ်စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်မညျးတျောကိုအစဉျအမွဲသင်ခွင့်လွှတ်နိုင်ပုံကိုအံ့သြနေကြသနည်း
ဒီတစ်ခါလည်းသင်သည်သင်၏အာရုံထံသို့လာရော့ခ်-အောက်ခြေ hit နှင့်သနားကရုဏာ၏ဘုရားသခင်ရဲ့ပွင့်လင်းလက်နက်မှ run ဖို့ဆုံးဖြတ်ပါတယ်?
နယူး King James Version
အစဉ်အဆက်မှတ်တမ်းတင်နိမ့်ဆုံး 18-Hole ဂေါက်သီးရမှတ်
တစ်ဦးတပတ်ရစ်စန္ဒယားဝယ်ခင်မှာကိုသိမှ 8 အရာ
အားလုံးအချိန် 25 အကောင်းဆုံး TI သီချင်းများ
ဗုဒ္ဓဘာသာ Logical လား?
လက်ဝှေ့သမား vs. နပန်းသမားများအား
ဘယ်လိုအမြန် RC ကားအမှန်ပင် Go သလား?
Gothic အဘိဓါန် Revival ဗိသုကာပညာတစ်ခုနိဒါန်း
အခမဲ့ High School တွင်သိပ္ပံတရားမျှတသောစီမံကိန်းများ
Castile ၏ blanche
-Norman Rockwell အားဖြင့် "ကျနော်တို့အားလုံးအတူ Live အဆိုပါပြဿနာ"
Batman အဖြစ်မိုက်ကယ် Keaton ၏ကာစ်6Angry တုံ့ပြန်မှု
စံ Deviation များအတွက် range နည်းဥပဒေ
Brokeback Mountain ဟာသ
ESL Classes ရဲ့အဘို့အရောင်းနှင့် Acquisitions ဝေါဟာရ
ထိပ်တန်း 10 ဦးပေါ့ပ်သီချင်းများ - နွေရာသီ 2000